Granit Xhaka Oo Taariikh Cusub Oo Dhinaca Akhlaaq-xumada Ah Ka Bilaabay Premier League - GOOL24.NET
Granit Xhaka Oo Taariikh Cusub Oo Dhinaca Akhlaaq-xumada Ah Ka Bilaabay Premier League
January 14, 2022 Abdiwahab Ahmed
Xiddiga Arsenal ee Granit Xhaka ayaa furay taariikh cusub oo dhinaca akhlaaq-xumada ah oo looga diiwaangeliyey horyaalka Premier League kaddib markii uu kaadh casaan ah qaatay kulankii Liverpool ee Khamiistii.
Arsenal oo hore u noqotay kooxdii ugu akhlaaqadda xumayd Premier League markii uu dhowaan difaaca reer Brazil ee Gabriel Magalhaes uu qaatay kaadhka cas ee uu kulankii Manchester City kaga baxay garoonka, waxa u buuxsamay kaadhkii 100aad ee casaan ah ee intii uu horyaalku qaatay magaca Premier League.
Kaddib markii uu Gabriel buuxiyey tirada boqolka casaan, Granti Xhaka ayaa isaguna furay oo bilaabay boqolka labaad ee kaadhadhka casaanka Arsenal, isaga oo dhinaca kalena sii kordhiyey rikoodhka akhlaaq-xumada.
Intii uu joogay Mikel Arteta, waxay Arsenal qaadatay 13 kaadh oo casaan ah, waana muddo laba sannadood iyo laba bilood ah.
Mikel Arteta ayaan waxba ka beddelin in kooxdiisu ay iska ilaaliso kaadhadhka casaanka ah, waxaana layaab leh in muddo laba sannadood ah laga saaro 13 ciyaartoy. Kooxda kusoo xigta waxay qaadatay siddeed kaadh oo casaan ah, taas oo ka dhigan in Arsenal ay shan kaadh dheer tahay.
December 2019 ayuu Mikel Arteta la wareegay xilka, waxaana 13ka kaadh ee illaa waqtigaas ay qaadatay kooxdiisu kusoo xigta Southampton oo siddeed haysata, halka Manchester City iyo Brighton ay min toddoba kaadh qaateen tan iyo December 2019.